सधैं विवादमा आइरहने बेलगाम विधकाे ‘भिआइपी’ कनेक्सन – Health Post Nepal
सधैं विवादमा आइरहने बेलगाम विधकाे ‘भिआइपी’ कनेक्सन
२०७८ जेठ १५ गते १०:३६
स्थापनाको सुरुवातदेखि नै विवादमा आएको विध म्यानेजमेन्ट प्रालि फेरि अहिले चर्चामा छ। महामारीकै बीचमा स्वास्थ्य व्यवसाय सुरुवात गरेको यो प्रालिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै फेरि व्यापारका विवादित श्रृङ्खला सुरु गरेको छ।
के हो विध म्यानेजमेन्ट र विध ल्याव?
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा निकै विवादित कम्पनी ‘ओम्नी’ प्रकरणपछि त्यस्तै व्यवसायमा उदाएको एउटा निजी कम्पनी हो ‘विध’।
सुरुमा यो कम्पनीले नै चलाएको ‘विध ल्याव’ कोरोना भाइरसको जाँच गरेर आफ्नो काम गरेको थियो। सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएसँगै विध ल्याव चर्चामा आएको थियो।
तर, त्यो बेलै पनि यो विवादमा मुछियो। कम्पनीले सरकारलाई बेचेको ‘आरडिटी’ किट पनि गुणस्तरहीन पाइएको थियो। र त्यो सरकारी प्रयोगशालामा प्रयोग गरिएन।
ओम्नी विवादमा तानिएपछि उसले ल्याएका कतिपय स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई बिध म्यानेजमेन्टले बजारमा बिक्रि पनि गरेको थियो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमति नदिँदै काम सुरु गरेको विधले गुणस्तरहीन किट आफै प्रयोग गरेको सार्वजनिक भएपछि उपत्यकाका कतिपय अस्पतालहरूले उससँगको सहकार्य तोडेका थिए।
अहिले पनि उपत्यकाका करिब ५० निजी तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो ‘बिजनेश पार्टनरशीप’मा सूचीकृत गरेको छ।
तर कतिपय अस्पतालले भने बिध ल्यावसँग कुनै पनि सहकार्य नभएको जनाएका छन्।
जस्तो कि यो ल्यावको वेभसाइटमा परोपकार प्रसुती गृह, शुक्रराज ट्रपिकल, भक्तपुर अस्पताललगायतका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि ‘व्यापार साझेदार’का रुपमा राखेको छ।
तर यी सबै अस्पतालहरूले यो ल्याबसँग कुनै पनि ‘सहकार्यका लागि सम्झौता’ नभएको बताएका छन्। कतिपय अस्पतालले त त्यसरी गलत प्रचार गरिएको भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताएका छन्। सूचीअनुसार वीर, टिचिङलगायत सबैजसो सरकारी अस्पताल उसका ‘व्यापार साझेदार’ हुन्।
ल्यावका प्रवन्धक रवीशंकर पोखरेलका अनुसार ती अस्पतालले संकलन गरेका नमुना विधले परीक्षण गर्छ। त्यसवाफत निश्चित शुल्क पनि तोकिएको हुन्छ।
कतिपय निजी अस्पतालले भने ल्यावका मान्छे आफै आएर बिरामीसँग बिल काट्ने र रिपोर्ट पनि उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछन्। र अस्पताल र ल्यावबीच त्यस विषयमा कुनै पनि लेनदेन वा सम्झौता नभएको ती अस्पतालहरूले दाबी गरेका छन्।
‘सबै अस्पतालहरूमा आफ्नै ल्याव छैन। त्यसमा अहिले खासगरी पिसिआर जाँच सबैमा नहुने भएका कारण हामीले सहजीकरण गरिदिएका हौं’ पोखरेलले भने।
विध ल्यावले केही समयअघि पोखरामा पनि आफ्नो शाखा खोलेको थियो। सबै संचरना तयार गरेर काम सुरु गरिसकेपछि भने अनुमति विना सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै बन्द गरिदिएको छ।
‘हामी अनुमतिकै प्रक्रियामा थियौं। पहिला सबै भौतिक संरचनाहरू बनाएरमात्रै अनुमति लिनुपर्ने भएका कारण त्यसैको तयारी गरेका थियौं’ पोखरेलले भने ‘तर त्यहाँ संकलन भएका नमुनाहरू हामीले काठमाडौंमै ल्याएर परीक्षण गर्दै आएका थियौं। अहिले पनि पोखराबाट नमुना आउँछन्।’
प्रशासनले ताला लगाइदिएपछि अहिले पोखराको ल्याव भने बन्द छ।
उसले आफूलाई देशकै सबैभन्दा ठूलाे र आधुनिक प्रयोगशालाका रुपमा चिनाइरहेकाे छ।
को हुन् यसका सञ्चालक?
गुल्मीका युवा बि.के. भन्डारी अर्थात् भीमकान्त भन्डारी यो कम्पनीका अध्यक्ष हुन्। उनी यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष गाँसिनुअघि उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी थिए।
त्यो बेला उनी नेकपा निकट कर्मचारी संगठनमा पनि आवद्ध भएका थिए। त्यसैले कतिपयले उनलाई तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि जोडेका छन्।
तर उनी पहिलादेखि नै त्यहाँ कार्यरत थिए। पुनको सचिवालयले भने उनीसँग कुनै राजनीतिक ‘साइनो’ नभएको बताउँछ।
‘उहाँ पहिलादेखि नै त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँसँग जोडिएका कुराहरू आएका छन् ती सबै झुठा हुन्। त्यहाँ लगानी छ, वर्षमानको पैसा छ भन्ने कुरा आएका छन्’ नेता पुनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले भने ‘सम्पत्ती कति छ भनेर त हरेक वर्ष सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका हुन्छौं।’
उनका अनुसार पार्टीको भातृ कर्मचारी संगठनमा आवद्ध भएका नाताले पनि केही निकटता बढेको हुनसक्छ।
‘तर व्यावसायिक रुपमा हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन’ सचिव पुनले भने।
महामारी संकटकै बीचमा स्वास्थ्य व्यवसायमा हात हालेका भन्डारीले अहिले अभाव चर्किरहेका बेला ठ्याक्कै अक्सिजनका सिलिन्डर आपूर्तिमा अगुवाइ गरिरहेका छन्।
सरकारलेसमेत अरु देशहरूसँग केही थान सिलिन्डर सहयोग थापिरहेका बेलामा भन्डारीको बिध म्यानेजमेन्टले भने चीनबाटै ल्याएर यहाँ सिलिन्डर बेचिरहेको छ।
अहिले नेपालमा सिलिन्डर आयात गर्ने अर्को कुनै ठूलो व्यापारिक फर्म छैन।
यो अभावका बीचमा आफूले जस लिनका लागि कतिपय नेताहरूले सिलिन्डर किनेर आफ्नो क्षेत्रमा पठाउने गरेका छन्।
त्यसैको एउटा ‘नमुना’ पात्र भएका छन्– बनमन्त्री प्रेम आले।
आलेले केही दिनअघि आफ्नो प्रदेश सुदूरको डोटी जिल्ला अस्पतालका लागि सिलिन्डर पठाइदिएका थिए। ती सिलिन्डरमा उनले आफ्नो तस्विरसमेत टाँसेका थिए।
कतिपयले ती चीनले अनुदानमा दिएको सिलिन्डरहरू आफ्नो तस्विर टाँसेको भनेर आलोचना गर्न थालेपछि उनले आफ्नै पैसाले सिलिन्डर किनेर अस्पताललाई सहयोग गरेको भनेर प्रष्टोक्त्ति पनि दिनुपर्‌यो।
त्यत्तिमै पनि उनको आलोचना नथामिएपछि विध ल्यावले मन्त्री आलेकै नाममा काटेको बिलसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्‌यो।
त्यो बिलमा आलेले ४० लिटरका ६० वटा अक्सिजन सिलिन्डर २३ हजारका दरले किनेको देखिन्छ। र उनले १३ प्रततिशत भ्याटसहित १५ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
सरकारले भने लगभग भ्याटसहित २४ हजारमा भरिएका नयाँ सिलिन्डर खरीद गरेर केही अस्पतालहरूलाई दिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सरकारले खरिद गरेका करिब १ हजार सिलिन्डर प्रदेशहरूमा पठाएको थियो। यी ४८ लिटरका सिलिन्डर थिए।
तर विधले भने अहिले ४० लिटरका सिलिन्डरमात्रै बेचिरहेको छ। मेडिकल प्रयोजनका लागि उसले चीनबाट ल्याएका सबैजसो सिलिन्डरहरू ४० लिटरकै छन्।
निजी क्षेत्रले भने भरिएको सिलिन्डर करिब करिब २१ हजारजतिमा किनेका छन्।
यो विवाद नथामिदैँ फेरि अर्का नेता वर्षमान पुन पनि तानिए। रोल्लाको जिल्ला अस्पताल तथा अरु केही गाउँपालिकाका लागि अक्सिजन सिलिन्डर किन्नका लागि उनले बिध म्यानेजमेन्टसँग समन्वय गरिदिएका थिए।
त्यसको भुक्तानी भने गाउँपालिका र अस्पताल आफैले गरेका हुन्। बिल पनि अस्पतालकै नाममा काटिएको छ। तर रोल्पा पठाइएका सिलिन्डरको मूल्य भने थप ३ हजार बढी छ।
विधले भने ती सिलिन्डर भैरहवमा भरेको (रिफिल गरेको) र ढुवानी गरेकोसमेतको मूल्य पनि त्यसैमा जोडेको जनाएको छ। ती सबैमा भ्याट पनि लगाइएको छ।
‘हामीले समन्वयमात्रै गरिदिएका हौँ। आफ्नै जिल्लाको लागि त्यो पनि यस्तो महामारीमा काम त गर्नैपर्छ नि!’ नेता वर्षमानका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले भने ‘राम्रो काम गर्दा झन् अनेक आरोप खेप्नुपर्‌यो।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डरलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै करहरू छुट दिने बताएको थियो। तर आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भने संकटका बेला आयात गर्न सजिलो होस् भनेर त्यसो गरिएको र बाहिरबाट ल्याएर यहाँ बेच्दा भने किन्नेले भ्याट तिर्नुपर्ने भनेको छ।
भन्डारी भन्छन्– राजनीतिसँग जोडियो
सामान्यतया भन्डारी आफूलाई एउटा विशुद्ध व्यवसायीका रुपमा चिनाउन रुचाउँछन्। सेवाभाव पनि देखाउँछन्। केही दिनअघि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा एक्सट्रयाक्सन किट सकिएर पिसिआर परीक्षण रोकिएपछि भन्डारीले ल्याबका तर्फबाट २ हजार किट सहयोग गराएका थिए।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सबैभन्दा धेरै अक्सिजनको अभाव झेल्नुपर्ने भयो। अहिले पनि अक्सिजनको हाहाकार उस्तै छ। देश विदेशबाट अक्सिजनका सिलिन्डर सहयोग आइरहेको छ।
उनले यही मौकामा चीनबाट सिलिन्डर मगाएर र यहाँ बेच्न थाले। अक्सिजनका प्लान्ट लगाउनका लागि परामर्शदेखि त्यसकाे लागि प्लान्ट आयातसम्ममा सहजीकरण उनी आफैले गरिरहेका छन्।
देशभर सिलिन्डरको अभाव भइरहेका बेलामा बिधले सिलिन्डर ल्याएपछि सबै नेताहरूलाई सजिलो पनि भयो। उनीहरूले त्यहीँबाट सिलिन्डर किनेर आफ्नो क्षेत्रमा पठाउन थाले।
‘मैले त विशुद्ध व्यवसाय गरेको हुँ। तर मलाई राजनीतिमा पो जोडियो’ भन्डारीले भने ‘यस्ता विवाद आइरहन्छन्। हामीले नराम्रो काम गरेका छैनौं। व्यवसायलाई राजनीतिसँग जोड्दाचाहीँ नराम्रो लाग्छ।’